Natiijooyinka Kulamada Europe League: Arsenal, Granada, Iyo Roma Oo U Soo Baxay Wareega 8aad
HomeFalanqeynta KulamadaNatiijooyinka Kulamada Europe League: Arsenal, Granada, iyo Roma oo u soo baxay Wareega 8aad
Kooxda Arsenal ayaa Garoonkeeda Emirates Stadium kula ciyaartay dhigeeda Olympiacos kulan ka tirsan Europe League oo guul daro dhabarka loo saariyay Gunners inkastoo ay u soo baxeen wareege xiga.
Arsenal ayaa durduro ku timid wareegga iyadoo celceliska labada ciyaarood kusoo baxday 3-2, waxaana ka caawisay libintan shaqadii fiicnayd ee ay ciyaartoygeedu qabteen kulankii hore.
Olymbiakos ayaa qaybtii dambe ee ciyaarta dhashatay goolka madiga ah ee caawa kala saaray labada kooxood, iyadoo uu shabaqa soo taabtay daqiiqaddii 51aad xiddiga Carbeed ee Youssef El Arabi.
Kooxda reer Talyaani ee AS Roma ayaa iyaduna guul weyn ka gaadhay Shakhtar Donetski labadii ciyaarood ee labada garoonba, waxaana caawa ay guushu ku raacday 2-1.
Weeraryahanka reer Spain ee Borja Mayoral ayaa Roma u dhiibay hoggaanka bilowga qaybta labaad, laakiin Shakhtar Donetsk ayaa 11 daqiiqadood kaddib ciyaarta isku-mid kaga dhigtay gool uu u saxeexay Junior Moraes.
Mayoral ayaa mar kale muujiyey awooddiisa gool-dhalinta waxaana daqiiqaddii 72aad uu goolka Shakhtar ku hubsaday kubbad uu ka helay Carles Perez.
Celceliska labada kulan ayay AS Roma kusoo baxday 5-2, waxaanay sugaysaa in nasiibkeeda ay ka qaaddo isku-aadka wareegga siddeedda oo berri oo Jimce ah la samayn doono.
Kooxda reer Spain ee Granada ayaa iyaduna u gudubtay wareegga siddeedda inkasta oo kooxda Molde ay kaga badisay 2-1, waxa se Granarada caawisay kulankii hore oo ay 2-0 kusoo badiyeen, taas oo celceliska labada ciyaarood ka dhigtay 3-2.
ugu danbeyn kooxda Dinamo Zagreb ayaa u soo baxday wareega xiga kadib guul ay ka gaareen kooxda Tottenham goolashada kulanka ayaa yimid labo gool oo dhashay qeybta danbe halka goolka saddexaad uu yimid 30 daqiiqo ee dheeriga waxana sadexley dhaliyay xidiga Mislav Orsic.